IGlyphosate kwimbungulu yenkukhu esetyenziswa njengesichumiso yonakalisa imveliso yokutya, abaphandi bathi- Ilungelo laseMelika lokwazi
IGlyphosate kwimbungu yenkukhu esetyenziswa njengesichumiso yonakalisa imveliso yokutya, abaphandi bathi
ezaposwa ngomhla Septemba 9, 2020 by UCarey Gillam
Izazinzulu zizise ezinye iindaba ezimbi ngokubhekisele kwi-herbicide glyphosate, eyaziwa ngokuba yiRoundup, kwiphepha elitsha lophando elipapashwe kule nyanga.
Abaphandi abavela kwiYunivesithi yaseTurku eFinland ityhilwe ephepheni papashwe kwincwadi Inzululwazi Yendalo Engqongileyo iyonke ukuba umgquba ovela kwiinkuku ezisetyenziswa njengesichumisi unganciphisa isivuno sezityalo xa umgquba uqukethe iintsalela zemichiza yokutshabalalisa ukhula esekwe eglyphosate, efana neRoundup. Izichumisi zenzelwe ukonyusa imveliso yezityalo, ke ubungqina bokuba iintsalela zeglyphosate zinokuba neziphumo ezichaseneyo zibalulekile.
Inkunkuma yenkukhu, njengoko ibizwa njalo umgquba, ihlala isetyenziswa njengesichumisi, kubandakanywa nezolimo eziphilayo, kuba ithathwa njengezityebile kwizakhamzimba eziyimfuneko. Ukusetyenziswa kwenkunkuma yenkuku njengesichumisi bekukhula kokubini kwezolimo kunye nokulima kunye nezitiya zasekhaya.
Ngelixa ukusetyenziswa kukhula, “umngcipheko onokubakho onxulunyaniswa nokuqokelelwa kwe-agrochemicals kumgquba weenkukhu usahoywa kakhulu,” balumkisa abaphandi baseFinland.
Amafama e-organic aye akhula exhalabile malunga nomkhondo we-glyphosate kwisichumiso somgquba esivunyelwe kwimveliso yezinto eziphilayo, kodwa uninzi kolu shishino aluthandabuzi ukwazisa lo mbandela.
Amafama atshiza i-glyphosate ngokuthe ngqo kwinani lezityalo ezikhuliswe kwihlabathi liphela, kubandakanya iimbotyi zesoya, umbona, umqhaphu, i-canola kunye nezinye izityalo ezenzelwe ufuzo ukumelana nonyango lwe-glyphosate. Bahlala betshiza ngokuthe ngqo izityalo ezifana nengqolowa kunye ne-oats, ezingafakwanga ngokwemfuza- kwakamsinya phambi kokuvuna ukomisa izityalo.
Ngenxa yemiyinge yokubulala ukhula eglyphosate-based esetyenziselwa ukunyanga izityalo ezisetyenziswa ekutyeni kwezilwanyana, kunye nomthamo womgquba osetyenziswayo njengesichumisi, "kufanele ukuba siyazi ukuba olu hlobo lomngcipheko lukhona," utshilo omnye wababhali. yokufunda, u-Anne Muola.
Akukho mntu ubonakala enomdla wokuthetha kakhulu malunga nayo. ” Muola uqaphele.
Ukusetyenziswa okunzima kwe-glyphosate herbicides ngokuthe ngqo kwizityalo zokutya kukhuthazwe yiMonsanto - ngoku iyunithi yeBayer AG - ukusukela nge1990s, kwaye ukusetyenziswa kwe-glyphosate kuxhaphake kangangokuba iintsalela zihlala zifumaneka ekutyeni, emanzini nakwiisampulu zomoya.
Kuba kukho iintsalela zeglyphosate kukutya kwabantu nakwizilwanyana, amanqanaba e-glyphosate anokufunyanwa kumchamo womntu nakwimanyolo yezilwanyana.
Ezi ntsalela zeglyphosate kwisichumiso ziyingxaki kubalimi ngenxa yezizathu ezininzi, ngokutsho kwabaphandi baseFinland.
"Sifumanise ukuba umgquba weenkukhu unokuqokelela intsalela ephezulu (ye-glyphosate-based herbicides), unciphise ukukhula kwezityalo kunye nokuzala, kwaye ke kuthintele ukukhula okunyusa ukukhula komgquba xa usetyenziswa njengesichumiso," latsho iphepha. "Ezi ziphumo zibonisa ukuba intsalela idlula kwinkqubo yokuhlafunisisa kweentaka, kwaye okona kubaluleke kakhulu, iyaqhubeka isichumiso ixesha elide."
Abaphandi bathi iintsalela zeglyphosate zinokuqhubeka kwiinkqubo zendalo, zichaphazela izinto ezininzi ekungajoliswanga kuzo kwiminyaka emininzi.
Iziphumo, bathi, zibandakanya ukunciphisa ukusebenza komgquba njengesichumisi; ukungcoliseka kweherbicide esekwe kwi-glyphosate esekwe kwimijikelezo yezolimo; Ungcoliseko "olungalawulwayo" lweglyphosate yemimandla engajoliswanga kuyo; ukwanda kwesoyikiso "kwizinto ezisemngciphekweni ekungajoliswanga kuzo," kunye nomngcipheko okhulayo wokuxhathisa okuvela kwi-glyphosate.
Abaphandi bathi kufuneka kwenziwe uphando oluninzi ukuveza ubungakanani bokungcoliseka kwe-glyphosate kwizichumiso zezinto eziphilayo kunye nendlela echaphazela ngayo uzinzo.
Uphando lwaseFinland longeza kubungqina bobungozi bezintsalela zeglyphosate kwisichumisi, ngokweengcali zezolimo.
"Iimpembelelo zentsalela ye-glyphosate ethe yaqokelelwa kwilindle leenkuku yindawo engakhathalelwanga," utshilo isazinzulu somhlaba iRodale Institute, uGqirha Yichao Rui. “Kodwa oluphi uphando olwenziweyo lubonakalisile ukuba ezo ntsalela zinganefuthe elibi kwizityalo, ukuba umgquba weenkukhu wawusetyenziswa njengesichumiso. Intsalela yeGlyphosate kwizichumisi ibonakalisiwe ukuba ineziphumo ezibi kwizityalo, ii-microbiomes zomhlaba, kunye neentsholongwane ezinxulunyaniswa nezityalo kunye nezilwanyana kubandakanya nabantu kwikhonkco lokutya. Xa olu tshintsho lusasazwa ngabom ngesichumiso, lubeka uxinzelelo olukhulu kwimisebenzi nakwiinkonzo zendalo. ”
Ehlabathini lonke i-9.4 yezigidi zeetoni yeglyphosate Utshiziwe emasimini- ngokwaneleyo ukutshiza phantse isiqingatha sephawundi yeRoundup kuwo onke amahektare alinywayo emhlabeni.
Ngo-2015, i-Arhente yeHlabathi yezeMpilo yoPhando ngomhlaza (IARC) I-glyphosate echaziweyo njenge-mhlawumbi i-carcinogenic ebantwini”Emva kokuphonononga iminyaka yophando kunye nophengululo olwenziwe ngontanga. Iqela lezenzululwazi zamazwe aphesheya lafumanisa ukuba kukho umbutho othile phakathi kwe-glyphosate kunye ne-non-Hodgkin lymphoma.
Amashumi amawaka abantu eUnited States abaphethwe yi-non-Hodgkin lymphoma Ndimangalele uMonsanto, kwaye kwizilingo ezintathu ezigcinwe ukuza kuthi ga ngoku, amajaji afumanise ukuba inkampani ye-glyphosate herbicides ibekwasizathu sokubangela umhlaza.
Ukongeza, i Uluhlu lwezifundo zezilwanyana kukhutshwa kweli hlobo kubonisa ukuba ukubonakaliswa kwe-glyphosate kunefuthe kumalungu okuzala kwaye kunokusongela ukuzala, kongeze ubungqina obutsha bokuba iarhente yokubulala ukhula inokuba ukuphazamisa i-endocrine. Ukuphazamiseka kwemichiza kwe-Endocrine kunokulinganisa okanye kuphazamise iihomoni zomzimba kwaye kunxulunyaniswa nengxaki zokukhula kunye nokuzala kunye nengqondo kunye nokungasebenzi komzimba.
Pesticides, Akohlulwanga ulimo, Bayer, iinkukhu, izityalo, zolimo, chumisi, Finlend, ukutya, kwigadi, ukulima, udoti, umgquba, IMonsanto, eziphilayo, izityalo, yenkukhu, uphando, inzululwazi
IParquat yokuLinga ukuLinga